Qabowgii ugu darnaa 100 sano | Somaliska
Qabowgii ugu darnaa mudo 100 sano ah ayaa ku dhuftay Sweden isbuucaan kaasoo sababay shilal, koronto la'aan, diyaaradihii iyo tareemadii oo la joojiyay iyo dhibaatooyin kale. Hay'ada La socodka Cimilada (SMHI) ayaa sheegtay in qabowga qamiistii ku dhuftay Sweden uu ahaa kii ugu darnaa mudo 100 sano ah. Magaalada Örnsköldsvik ee bariga Sweden ayaa goronto la'aan ku dhacday ayadoo saacado badan ay ilaa 2,300 oo guri ay koronto la'aan ahaayeen. halka waqooyigana laga soo sheegayo dhibaatooyin la mid ah. Sidoo kale diyaarado badan ayaa la kansaley ayadoo tareemo badana basas lagu badalay. Magaalada Luleå ayaa waxaa isku dhacay bas arday waday iyo gaari wayn ayadoo 8 arday ay ku dhaawacantay. Cimiladaan qatarta ah ayaa la filayaa in ay sii socota maanta oo jimca ah iyo bari oo sabti ah ayadoo la filayo in meelaha qaarkood ay kaarto -25 ayadoo Axada ay macquul tahay in waqooyiga Sweden ay gaarto -35.
Qabowgii ugu darnaa 100 sano
Qabowgii ugu darnaa mudo 100 sano ah ayaa ku dhuftay Sweden isbuucaan kaasoo sababay shilal, koronto la’aan, diyaaradihii iyo tareemadii oo la joojiyay iyo dhibaatooyin kale. Hay’ada La socodka Cimilada (SMHI) ayaa sheegtay in qabowga qamiistii ku dhuftay Sweden uu ahaa kii ugu darnaa mudo 100 sano ah.
Magaalada Örnsköldsvik ee bariga Sweden ayaa goronto la’aan ku dhacday ayadoo saacado badan ay ilaa 2,300 oo guri ay koronto la’aan ahaayeen. halka waqooyigana laga soo sheegayo dhibaatooyin la mid ah.
Sidoo kale diyaarado badan ayaa la kansaley ayadoo tareemo badana basas lagu badalay. Magaalada Luleå ayaa waxaa isku dhacay bas arday waday iyo gaari wayn ayadoo 8 arday ay ku dhaawacantay.
Cimiladaan qatarta ah ayaa la filayaa in ay sii socota maanta oo jimca ah iyo bari oo sabti ah ayadoo la filayo in meelaha qaarkood ay kaarto -25 ayadoo Axada ay macquul tahay in waqooyiga Sweden ay gaarto -35.
Xanaano lagu haysto in ay caruurta u dhigeen diinta Islaamka